Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ogeysiis u dirtay Qurbajoogta Soomaaliyeed. – Radio Muqdisho
Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo ogeysiis u dirtay Qurbajoogta Soomaaliyeed.
in Shaqooyinka, Wararka
Waaxda Qurbajoogta ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga waxa ay qabanaysaa kulan wadatashi oo ku qabsoomaya “Video conferencing” 20 bishan November oo looga hadli doono Siyaasadda Qaran ee Qurbajoogta Soomaaliyeed.
Sidaas awgeed waxaa laga codsanayaa dhammaan ururrada jaaliyadaha Soomaaliyeed in ay iska diiwaangeliyaan linkigan si ay uga qeybgalaan https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeG2SrVu7SLTG…/viewform .
Is-diiwaangelintu waxa ay furantahay inta u dhexeysa 1-12 November –
Fadlan haddii xog dheeraad ah aad u baahantahay kala xiriir Waaxda Qurbajoogta iimeelkan: diaspora@mfa.gov.so
RW Rooble oo hambalyo u diray Xildhibaanada la doortay ee Golaha Shacabka.
Wasiirka Caafimaadka Galmudug oo kormeeray qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Guriceel.